Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 10:06 AM
this is really nice post..... about love,
but i couldnt feelafamily here after ready it... may be there isablank that u guys hevnt fill in yet... ;)
ညီမလေး လွမ်းနေတာလား... ချစ်တတ်တဲ့သူတွေအတွက် အလွမ်?ဆိုတာလည?း တွဲ?ါ?ာတ?်တာပါပဲ။
Lyn Lyn >> သူငယ်ချင်းရေ “အချစ်”က လူကိုပြောင်းလဲစေပါတယ်။ ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ဖို့က ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ နင်လည်း သိချင်ရင် ချစ်သူထားကြည့်ပြီး အမြန်လက်တွဲပေါ့ :P
မနှင်းဟေမာ >> ကျေးဇူးပါရှင်။ လက်ရှိမှာလည်း ပျော်ရွှင်စရာကောင်းသော မိသားစုလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် ကျေနပ်မိပါတယ်။ ကိုသက်ပိုင်သူ ထင်သလို မိသားစုဆိုတာ (၃)ယောက်မှ ခေါ်လို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးနော်။ မိသားစုဆိုတာ (၂)ယောက်က စတင်တာမို့ ထိမ်းမြားလက်ထပ်ပြီးရင် “မိသားစု”လို့ ခေါ်ခွင့်ရှိပါပြီရှင်။ Btw, ကျွန်မနာမည်က “လင်းလက်ကြယ်စင်”ပါရှင်။ ကကြီးနဲ့ “လက်”ပါတယ်။ ဘလော့ခ်ဘန်နာမှာ မြန်မာလိုပေါင်းပြထားပါတယ်ရှင်။ Shining Star လို့ အမည်ပေးထားတာပါ :)
လင်းလက်ရေ...လာလည်သွားပါတယ်။ အသစ်တွေတင်ဖို့အချိန်မအားဘူးထင်တယ်နော်။ အားတဲ့အခါငါ့ဆီလဲ လာလည်ပါဦး။
သမီးပို့စ်လေး ဖတ်ရတာ ကြည်းနူးစရာလေးးး
this is my first and last time visit to this blog.
Ny ma yay, Please ignore all the comments who doesn't want to mentioned their real names and their bad/jealous comments. we love you.
အိမ်ထောင်ကျပြီးတဲ့သူတွေအတော်များများဆီကကြားရတာ စိတ်ညစ်စရာတွေ... စိတ်ကုန်စရာတွေ.. နောက်.. အိမ်ထောင်ပြုတာပဲ တကယ့်ဒုက္ခဘုံထဲဆင်းမိသလိုမျိုး သင်္ခန်းစာပေးကြတာချည်းပဲ။ ဒီစာလေးဖတ်ရတာ ကဗျာဆန်လိုက်တာ။ တကယ်တော့ အိမ်ထောင်တခု ပျော်ရွင်ခြင်း.. ပျော်ရွင်မှုမရှိခြင်းဆိုတာ.. တယောက်နဲ့တယောက် ဘယ်လို အပေးအယူရှိကြလဲ.. နားလည်မှုပေးနိုင်ကြလဲ.. နောက်.. ဘယ်လောက် ချစ်ကြလဲပေါ့လေ.. အဲဒါတွေနဲ့ အများကြီးဆိုင်မယ်ထင်တယ်နော်.. ..
လင်းလက်ကြယ်စင်တို့ ဇနီးမောင်နှံ ပျော်ပျော်ရွင်ရွင်နဲ့ တသက်လုံး နေသွားနိုင်ပါစေလို့.. ဆုတောင်းပေးပါတယ်..